Ekwentị mkpanaaka: Ihe niile Need Kwesịrị Iji Mejuputa Ndepụta oku na nchịkọta gị | Martech Zone
Ka anyị na-aga n'ihu ịhazi mkpọsa ọtụtụ ọwa maka ụfọdụ ndị ahịa anyị, ọ dị mkpa ka anyị ghọta mgbe na ihe kpatara ekwentị ji akụ. Nwere ike tinye ihe omume na hyperlinked nọmba ekwentị iji nyochaa ọnụ ọgụgụ ịkpọ oku iji pịa, mana ọ naghị ekwe omume ọtụtụ mgbe. Azịza ya bụ itinye n'ọrụ oku na-esochi ma jikọta ya na nyocha gị iji hụ etu atụmanya si aza site na oku ekwentị.
Accuratezọ kachasị zie ezie bụ dynamically n'ịwa a nọmba ekwentị maka isi mmalite ọ bụla dị na otu koodu mpaghara. Ụzọ a oku ekwentị ọ bụla na-abata Enwere ike ịchọta ya n'ụzọ ziri ezi laghachi na mkpọsa mkpọsa ma ọ bụ usoro ị mepụtara ya. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịkpọ oku a nleta na Google Analytics na a mebere ụzọ ị nwere ike itinye n'ime nsụgharị nsụgharị.
Ihe a niile chọrọ ka ịnwere ọrụ dịka Ekwentị, A ọrụ wuru kpọmkwem maka ahịa ụlọ ọrụ jikwaa ndị ahịa ha na-akpọ nsuso.
Atụmatụ ekwentịWagon gụnye:
Mbido Nọmba Ekwenti ozugbo - Ekwentị Ekwentị na-enye kensinammuo ma dị mfe iji dashboard nke onye ọ bụla nwere ike ịghọta na ịnyagharịa. Site na ịpị bọtịnụ, ị nwere ike ịchọ koodu mpaghara ọ bụla ma gbakwunye nọmba ekwentị. N'ihe na-erughị sekọnd 30 ịnwere ike ịgbakwunye nọmba ekwentị, hazie nọmba ahụ, wee bido iji ozugbo.
Nọmba ekwentị mba ofesi - Phonewagon na-enye nọmba ekwentị mba ụwa na mba 80. Dashboard anyị dị mfe na-enye gị ohere ịchọ nọmba ekwentị site na koodu mba na mpaghara. N'ihe na-erughị 30 sekọnd ị nwere ike hazie nọmba ekwentị mba ụwa wee malite iji ya maka mkpọsa gị.
Nọmba ekwentị mpaghara - A gosipụtara nọmba ekwentị mpaghara ka ọ gbanwee nọmba dị elu karịa ọnụ ọgụgụ anaghị akwụ ụgwọ maka mkpọsa ahịa azụmaahịa obere azụmahịa. Ma ịchọrọ nọmba ekwentị mpaghara na obodo a kapịrị ọnụ ma ọ bụ naanị mpaghara mpaghara, PhoneWagon na-enye gị ohere itinye nọmba ekwentị mpaghara na-erughị 30 sekọnd.
Ọnụ ọgụgụ na-enweghị ego - Nọmba ekwentị na-enweghị ego dị mma maka mkpọsa ahịa mba. Ha nwere ike inye ụlọ ọrụ gị ọdịdị nke inwe ọnụnọ mba ma nye ndị ahịa ụzọ iji kpọọ gị n'efu. N'ime ntaneti anyi ị nwere ike tinye onu ogugu ekwentị na enweghi ego site na otutu nhọrọ dika 888, 866 na ndi ozo. Ọ na-ewe ihe na-erughị 30 sekọnd iji tinye nọmba ekwentị na-enweghị ego ma hazie ya.
Port Nọmba ekwentị gị ugbu a - youchọrọ iji nọmba ekwentị gị dị ma ọ bụ megharịa nọmba ị nwere na onye na-eweta nsuso oku ọzọ na PhoneWagon? Mfe. Anyị nwere ike ibugharị nọmba gị n'ime PhoneWagon site na usoro akpọrọ "porting". Phonewagon na-elekọta ibu niile ọ ga - enwe ọnụ ọgụgụ gị na akaụntụ ekwentị gị n'oge ọ bụla.
Akpọ oku - Nanị nsuso ekwentị oku ezughị. Na-ege ntị na-akpọ E ga-enyere gị aka ịzụ gị mkpara na optimizing ihe ha na-ekwu iji tọghata ọzọ oku n'ime-akwụ ụgwọ ndị ahịa. Oku E Kwunyere bụkwa a oké ụzọ laghachi na jidere a mpempe ozi na i nwere ike ichefu na-ede n'oge oku na-aga. Ekwentị gị na - enyere gị aka ịdekọ oku ma ọ bụ nọmba ekwentị gị ọ bụla ma kpọọ ozi ekele iji mee ka onye ọzọ na - akpọ oku mara na edekọ ya.
Whisper Ozi - Ozi ntanye anyị bụ ụzọ dị mma iji nye onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ na-aza ekwentị ụfọdụ nghọta banyere oku na-abịa. Mgbe ha zara oku ahụ, ịnwere ike igwu ha ozi dịka “oku a sitere na mkpọsa akwụkwọ ozi gị na onyinye ego ezumike”. Ndị ọrụ ugbu a nwere ọnọdụ ụfọdụ na oku ma nwee ike ịhazi otu ha si emekọrịta ya na onye ahịa dabere na ozi ahụ. Ọ dị ka koodu aghụghọ na-enyere gị aka imeri.
Ozi ekele - PhoneWagon na-enye gị ohere igwu egwu ozi ekele na mmalite nke oku ahụ. Nwere ike ịhọrọ ịdekọ ozi ekele omenala site na ngwa ọrụ okike nke mfe ma ọ bụ bulite ozi dị na faịlụ MP3. Ozi ekele nwere ike iwebata azụmahịa gị ma nye ndị ahịa gị ezigbo echiche ma ọ bụ na ị nwere ike ịhapụ onye na-akpọ oku ka a na-edekọ ya.
Oku Omenala-Mkpado - Mkpado oku na-enyere gị aka ịkọwapụta, hazie, ma ọ bụ kewaa oku ahụ dabere na njirisi ọ bụla ị na-achọ ịgbaso. Anyị nwere akara ngosi dị adị dị ka "ndu ọhụụ", "nọmba ezighi ezi", "ndị ahịa dị ugbu a", wdg. Anyị na-enyekwa ikike ịmepụta mkpado ahaziri iche na agba agba ozugbo site na dashboard anyị. Nwere ike mgbe ahụ na-agba ọsọ a akụkọ na-ahụ otú ọtụtụ oku (ma ọ bụ otú ọtụtụ ndị na-akpọ oge mbụ) na-eme na mkpado ọ bụla.
Nke imekotaotuugbo mgbanaka - Ọsọ ọgbọ na-agba ọsọ. Ngwa ngwa ị zaghachi, ma ọ bụ zaa ekwentị ahụ, ka ị na-eduga karịa ị ga-atụgharị n'ime ndị na-akwụ ụgwọ. Anyị na-enye ike ka ị kpọọ ọtụtụ ekwentị n'otu oge. Onye mbu gha azaghachi ya na onye na-akpọ ya. Nke a na - enyere aka belata oge ichere maka oku na - abata, na - enyefe ahụmịhe ndị ahịa ka mma, ma na - ewepụtakwu ahịa.
Unlimited Akaụntụ Akaụntụ - PhoneWagon na-enye gị ohere itinye ndị ọrụ na-akparaghị ókè na akaụntụ gị. Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọrụ dị iche iche na ikikere dị iche iche ka i wee nwee ike ịnye nbanye mmadụ niile ma ha ga-enwe ike ịnweta ihe ha chọrọ ịnweta.
Akaụntụ Ndị Ahịa - A haziri ekwentịWagon iji mepụta ọtụtụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ dị na akaụntụ ọ bụla. Nke a na - enyere gị aka idobe data gị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ziri ezi dịka ị na - eme na Mgbasa ozi Google. Agencieslọ ọrụ ịzụ ahịa nwere ike ịgbakwunye ndị ahịa ha niile ma nye nbanye maka ndị ahịa ọ bụla ga-enwe ike ịnweta ozi nke ha.
Nchịkọta Email - youchọrọ inweta ozi email na data niile gbasara oku gị na-enweghị nbanye ịbanye na dashboard gị? PhoneWagon na-enye nchịkọta email kwa ụbọchị, kwa izu, ma ọ bụ kwa ọnwa. Can nwere ike hazie ozi ịntanetị ndị a na ọbụlagodi ka ha si na ngalaba gị. Nke a na-enye ụlọ ọrụ na-ere ahịa ohere ka akara ha na-agbanwe mgbe ha na ndị ahịa na-ekwurịta okwu.
Email Oti mkpu mata - Email oku alerts ma ọ bụ email allowma Ọkwa-ekwe ka ị na-akpaghị aka na-eziga email n'oge ọ bụla e nwere ihe ọhụrụ oku ọ bụla mkpọsa ma ọ bụ i nwere ike ịtọ ya naanị zipu maka ụfọdụ mkpọsa. Are na-enwe ike ịhazi ozi ịntanetị ndị a iji zipu site na ngalaba gị (ntụgharị "notifications@yourdomain.com") iji debe akara ngosi mgbe niile mgbe gị na ndị ahịa gị na-ekwurịta okwu.
Akụkọ di elu - Mfe nweta akụkọ siri ike dabere na data oku ekwentị gị. Hụ data nghọta dị ka mkpọsa a na-akpọ oku na-agbanwe n'ime ịkwụ ụgwọ ndị ahịa ma ọ bụ ọtụtụ oku sitere na ndị na-akpọ oku oge mbụ na karịa 90 sekọnd. Jiri data a mee mkpebi ndị amamihe dị na mgbasa ozi na-eji na / ma ọ bụ na-azụ ndị ahịa gị otu ha nwere ike isi rụọ ọrụ ka mma n'ịgbanwe oku na-akwụ ndị ahịa ụgwọ.
Nọmba ekwentị di omimi - Dynamic nọmba ekwentị na-enyere gị aka soro ekwentị oku tọghatara n'otu ụzọ ị soro weebụ ụdị mgbanwe. Anyị na-enye gị otu akara nke koodu iji tinye na weebụsaịtị ma ọ bụ ọdịda peeji ma anyị na-eme ndị ọzọ. A na-enyocha oku ekwentị na nnọkọ ndị ọbịa ma ị nweta data ebe onye ọbịa ahụ si, mgbasa ozi ha pịrị, peeji nke ọdịda ha rutere, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mepụta ọnụọgụ dị ike na dashboard gị n'ihe na-erughị 30 sekọnd ma bido nyochaa ntụgharị ekwentị iji nweta nkọwa zuru ezu banyere ihe na-eme na mkpọsa ahịa gị.
Ọbịa na isiokwu-Ọkwa Ndepụta - Anyị na-enye ndị nleta na isiokwu-ọkwa nsuso iji nọmba anyị na-agbanwe agbanwe. Ebe ọ bụ na egosiri onye ọbịa ọ bụla nọmba pụrụ iche, anyị maara mgbe onye ọbịa ahụ kpọrọ nọmba pụrụ iche egosiri ha, ya mere anyị nwere ike ikwu na oku ha kpọrọ na nnọkọ ha. Nke a na-enye anyị data granular dịka isiokwu ha chọrọ na otu mgbasa ozi ha si.
Nchịkọta nchịkọta Google - Phonewagon na-enye ntinye ọnụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla na akaụntụ ekwentị gị na Google Analytics. Nwere ike ịkwanye oku ekwentị gị niile na Google Analytics dị ka ihe omume ka ị wee nwee ike ịhụ kpọmkwem ihe na-eme na ọnụọgụ ole ị na-anya, ọbụlagodi site na mmemme ndị a na-adịghị n'ịntanetị.
Njikọ Adwords Google - PhoneWagon jikọtara ya na Google Ads (nke bụbu Google Adwords). Site na otu ịpị, ị nwere ike iwekọta ụlọ ọrụ ọ bụla na akaụntụ ekwentị gị na akaụntụ MCC Google gị, họrọ obere akaụntụ, ma n'otu ntabi anya, anyị mepụtara ihe ntụgharị ọhụụ akpọrọ PhoneCalls nke ga-agbanye ntụgharị gaa na Mgbasa ozi Google maka oku niile sitere na ike gị nọmba na ụlọ ọrụ ahụ.
Akpaghị aka Text Ozi - Mepụta ozi ederede maka oku azaghị na ihe omume ndị ọzọ. Nke a na - enyere gị aka itinye ndị ahịa n’ozi nkwukọrịta kachasị amasị ha, izi ozi ederede, ma gbochie ha ịkpọ onye na-asọmpi ma ọ bụrụ na ị zaghị ekwentị gị.
Ekwadoro ekwentịWagon Kpọọ oku, onye ndu ozo na nyocha nyocha oku.
Malite Ọnwụnwa Free gị na PhoneWagon
Ngosipụta: Anyị nwere mmasị na PhoneWagon nke ukwuu nke na anyị bụzi Onye nnọchi anya ha!
Tags: otu adoku na-esochikpọọ nyocha nyochamgbasa ozi googlegoogle adwordsGoogle AnalyticsokpokoroEkwentị nsochiekwentị ekwentị
Etu ị ga - esi malite azụmaahịa na - ebubata ego